काठमाडौं को भर्जिन पार्क " भिराडिल खाइके साकुरा पार्क" - ParyatanBazar.com
काठमाडौं को भर्जिन पार्क ” भिराडिल खाइके साकुरा पार्क”
मंसिर १४, काठमाडौं– लामो समयको लक डाउन र कोरोना को त्रास बाट केही समय राहत लिन चाहनुहुन्छ? कतै रिफ्रेस हुन जाने इच्छा छ तर टाढा जान चाहनुहुन्न ! भिरपाखा मा रमाउन चाहनुहुन्छ तर गाउँ जान समय छैन । त्यसो भए तपाईंको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुनसक्छ काठमाडौं, तीनथाना को “साकुरा पार्क” ।
काठमाडौंदेखि करिब २ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने चन्द्रागिरी नगरपालिका तीनथाना क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँको लागतमा पार्क निर्माण भइरहेको छ । कलंकीबाट नैकाप नपुग्दै हाइवेबाट देव्रे गल्ली छिरेपछि ५ मिनेटकै दूरीमा छ ‘भिराडिल खाइके साकुरा’ पार्क ।
गाउँ र सहर दुवैतिरको मिश्रणजस्तो लाग्ने यस्तो रमणीय ठाउँ कीर्तिपुर र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सिमानामा छ । अनकन्टार भीर, खोंच र फोहोर फाल्ने ठाउँमा धेरैलाई लोभ्याउने र आनन्द दिलाउने यस पार्कले निर्माण पूरा नहुँदै धेरैको मन जित्न भ्याइसकेको छ ।
भीराडील र जापानी शहर खाइके र फूल साकुराको नामबाट राखिएको भीरडील खाइके साकुरा पार्कको निर्माण कार्य ४० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यस पार्कमा चौताराहरु, स्की वाच, रक क्लाइम्बिङ, थीयटर, जीपलाइन, बोटिङ लगायत २७ थरीका संरचनाहरुको निर्माणकार्य भइरहेको छ । करिव १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको यो पार्कका लागि अहिलेसम्म एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
रेल सञ्चालन व्यवस्था यस पार्कको थप आकर्षण हुनेछ । विगतमा काठमाडौंको मातातीर्थ देखि सतुङ्गल, तीन थाना, कुलेश्वर हुदै टेकु भन्सार सम्म सामान ओसार पसारका लागि सञ्चालन भएको रेलमार्ग अन्तर्गतको करिब ३०० मिटर सम्म रेल सञ्चालन गर्ने योजना छ । बिक्रम सम्वत १९८८ देखि २०१८ साल गरी ३० बर्ष सम्म यस क्षेत्रमा रेल सञ्चालन भएको इतिहास छ । सरकारी पर्ती २७ रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको यो पार्क अबको डेढ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
मिनी रेल रेल १२ देखि १५ सिटको हुनेछ । एउटा सिटमा २ जना बस्न मिल्छ । रेल बिजुली बत्तीबाट चल्नेछ ।